Ungayifaka njani imibala emnyama iifoto | Iindaba zeGajethi
Sonke sinesizalwane esidala, nokuba ngootatomkhulu noomakhulu okanye oomalume ikakhulu, abasele beza kudibana nomhla othile, nokuba sisikhumbuzo somtshato, umhla wokuzalwa okanye nasiphi na isizathu esisinyanzela ukuba senze isipho. Ukuba sifuna isipho sethu sikhetheke, akukho nto ingcono kuneefoto.
Ukuba ngabantu abadala, kunokwenzeka ukuba uninzi lwezi foto, ngakumbi xa zazisencinci, zimnyama zimhlophe. Nangona ezo ntlobo zeefoto zinomtsalane okhethekileyo, singayinika into ekhethekileyo kunye nemvakalelo yokuthatha ngokuthatha iminyaka embalwa ngokubanika umbala.
Ngokucacileyo, andithethi ukuba sizinikezela ngeFotohop ukuba sihambe imibala nganye yeendawo yemifanekiso ecingela imibala enokuthi iboniswe ngumbala, indlela eyayisetyenziswa kwiminyaka emininzi eyadlulayo ukufaka imibala kwiifilimu ezimnyama nezimhlophe, umsebenzi odinisayo obandakanya ukupeyinta zonke iifreyimu zefilimu (kwi-cinema 1 yesibini ziifreyimu ezingama-24) .
Ukuze ukwazi ukufaka imibala kwiifoto ezimhlophe ezimnyama, kunye nakwiifilimu ezimnyama ezimnyama, okwangoku kunokwenzeka ngendlela ekhawulezayo, kuba iyalelwe kwi isoftware eqeqeshiweyo (ukufunda okunzulu) ukufumanisa ngokuzenzekelayo imibala ye-grey emfanekisweni kwaye uyiguqulele kwimibala ye-spectrum (ubukrelekrele bokwenza).
1 Digitize imifanekiso
2 Faka imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe ngewebhu ngeCourourise
3 Faka imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe kwifowuni yakho
3.2 Umbala (iOS)
3.3 Faka imibala kwimifanekiso (Android)
4 Imibala yeefoto ezimnyama nezimhlophe nge-Photoshop
Zininzi izicelo / iinkonzo zokufaka imibala kwiifoto ezindala, zombini ngohlobo lweenkonzo zewebhu nakwimo yezicelo ze desktop kunye nezixhobo zefowuni. Kodwa kuqala nokuphambili, ukuba asinayo imifanekiso efundwayo Into esifuna ukuyiguqula kukusebenzisa usetyenziso lweGoogle lweFotosScan, usetyenziso olukhoyo kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android.
IfotoScan evela kuGoogle, iyasivumela skena iifoto ezindala ngekhamera ye-smartphone, ukuyila, ngaphandle kokongeza ukubonakalisa nokuyibuyisela kangangoko kunokwenzeka (ngaphandle kokwenza imimangaliso). Esi sicelo siyafumaneka simahla simahla ngenxa yeekhonkco ezingezantsi ze-iOS kunye ne-Android.
IfotoScan kwiifoto zikaGoogleMahala
Ukuba sisebenzisa iifoto zikaGoogle, zonke iifoto ziya kulayishwa ngokuzenzekelayo kwiifoto zikaGoogle, eziya kusivumela ukuba sizifikelele ngokukhawuleza kwikhompyuter yethu, ukuba siceba ukusebenzisa inkonzo yewebhu okanye usetyenziso lwe desktop, ngaphandle kokuyithumela ngeposi, ibluetooth, sizikhuphele ngentambo kwikhompyuter yethu ...
Faka imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe ngewebhu ngeCourourise
Njengoninzi lweenkonzo / usetyenziso olusivumela ukuba sifake imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe, siya kuhlala sifumana iziphumo ezingcono ukuba sisebenzisa imifanekiso kwesona sigqibo siphezulu sinokubakho. Into ebalulekileyo enxulumene nobumfihlo, siyifumana ekubeni imifanekiso esiyilayishayo kule webhusayithi ayihlali igcinwe kwiiseva, enye yeengxaki eziqhelekileyo zolu hlobo lwesicelo.
Imibala isebenza ngokulula kakhulu. Kufuneka nje sitsale umfanekiso esifuna ukuwuguqulela kuxande oboniswe kwiphepha lakho lewebhu, kwaye linda imizuzwana embalwa ide ilayishwe ngokuzenzekelayo kwaye ifakwe umbala.
Faka imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe kwifowuni yakho
IMyHeritage sisicelo esifumanekayo kuzo zombini i-iOS kunye ne-Android eguqula ngokuzenzekelayo iifoto zethu ezimnyama nezimhlophe ukuba zifake umbala. Lo ayingowona msebenzi uphambili wale sicelo, isicelo esenzelwe ukudala imithi yosapho, imithi apho singasebenzisa khona imifanekiso esiyifaka imibala kuyo.
Yonke imifanekiso esiyiguqulayo, singazithumela kwelinye ilizwe kwi-albhamu yethu yeefoto ukubanakho ukuzisebenzisela nayiphi na enye injongo engahambelani nesicelo. Inye kuphela kodwa ibandakanya ilivo encinci enegama lesicelo yikona esezantsi lasekunene lomfanekiso onombala.
Nje ukuba sivule usetyenziso, phakathi kwazo zonke iindlela esenziwa kuzo isicelo, cofa apha Iifoto.
Emva koko, cofa apha Yongeza imifanekiso kwaye sikhetha kwi-albhamu yethu yemifanekiso ukuba yeyiphi imifanekiso esifuna ukuyifaka umbala.
Ukuba khange siyivavanye ngaphambili, singayenza ngokuthe ngqo kwisicelo ngokuchofoza kuyo Skena iifoto kunye namaxwebhu (Nangona ezona ziphumo zibalaseleyo ziya kufumaneka ngeFotoScan kaGoogle.
Nje ukuba umfanekiso oza kufakwa umbala ufunyanwa kwi-reel yesicelo, cofa kuyo.
Okokugqibela, kufuneka sicofe kwisangqa esinemibala esikwindawo ephezulu yescreen kunye nemizuzwana kamva uguquko luya kwenziwa.
Ukuze sikwazi ukukhangela iziphumo, isicelo sisibonisa umgca wokuhamba onokuthi ume nkqo ukusuka ekhohlo ukuya ekunene ukuze ubone ukuba kwakunjani ngaphambi kokufaka umbala kwaye unjani emva kotshintsho. Ukuyigcina kwi-albhamu yethu yeefoto, kufuneka siklikhe nje kwiqhosha lesabelo, iqhosha esinokulithumela ngalo nge-imeyile, kuWhatsApp okanye nasiphi na isicelo esisifakileyo kwisixhobo sethu.
ILifa lam: Umthi woSaphoMahala
ILifa lam: Umthi woSapho
I-colorize yenye yezicelo ezijolise ekusivumeleni ukuba songeze umbala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe, iifoto ezindala nje ngesicelo sangaphambili. KwiVenkile yeApple sinokufumana ezinye usetyenziso esivumela ukuba sifake imibala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe, kodwa umgangatho wokugqibela abasinikelayo uphantsi kangangokuba Khange ndikhathazeke ukuyifaka kweli nqaku.
Nje ukuba sivule usetyenziso, cofa apha Skena okanye ulayishe ifoto.
Emva koko sicofa Ngenisa kwaye sikhetha umfanekiso wethala leencwadi esifuna ukulisebenzisa.
Emva kwemizuzwana embalwa, Kuthatha ixesha elide xa kuthelekiswa nezinye iinkqubo / iinkonzo endikubonise zona ngasentla, iya kuthi isinike iziphumo.
Lowo mfanekiso sinako ugcine kwi-reel yethu okanye wabelane ngokuthe ngqo nge-imeyile, kuWhatsApp okanye nasiphi na isicelo esisifakileyo kwikhompyuter yethu.
Faka imibala kwimifanekiso (Android)
Umbala weMifanekiso sesinye sezisombululo esinazo kwi-Android yongeza umbala wombala kwiifoto ezimnyama nezimhlophe. Esi kuphela kwesicelo esivumela ukuba siguqule amaxabiso athile kumfanekiso ofana nento enikezela kunye nokwahluka, okuthi nangona kuyinyani, kungasebenzi mimangaliso, ukuba kuyasivumela ukuba sifumane iziphumo zokugqibela ezingcono Andonwabanga lutshintsho lokuqala olwenzile usetyenziso.
Faka imibala kwimibala
Umthuthukisi: Faka imibala kwimibala
Imibala yeefoto ezimnyama nezimhlophe nge-Photoshop
Imibala yeefoto ngombala omnyama nomhlophe kwaye ilula kakhulu ngokusetyenziswa / kweenkonzo endikhe ndazichaza apha ngasentla. Nangona kwiimeko ezininzi, iziphumo zingaphezulu kokumkelekileyo, ngamanye amaxesha zisenokungamkeleki. Kwezo meko, kufanelekile lungisa umbala omnyama wefoto kwaye usebenzise ezi nkonzo kwakhona.
Ukuba sinexesha, ixesha elininzi, umonde kunye nolwazi lwe-Photoshop, singasebenzisa esi sixhobo esihle sokuhlela i-Adobe, a Inkqubo enzima kunye neyinkimbinkimbi esingazukuyicacisa ngokupheleleyo kweli nqaku. Kodwa ukukunika umbono, kwiifoto ezimnyama kunye ezimhlophe ezinemibala, kufuneka sikhethe nganye nganye yazo zonke iifoto esifuna ukuzifaka imibala.
Nje ukuba sikhethe zonke izinto eziya kuba nombala ofanayo, kufuneka senze umbala oqinileyo wokugcwalisa umbala (lowo sifuna ukuwusebenzisa kuloo ndawo). Kuba lungelelanisa umbala kwisithunzi somfanekisoKwiipaneli zomaleko kufuneka sikhethe imowudi yokudibanisa imibala ukuze umbala uhambelane nezinto esizikhethileyo.
Okokugqibela, kufuneka silungelelanise umahluko wazo zonke iindawo esizikhethileyo kwaye sisebenzise umaleko wombala kwiiCurves ukuya lungisa abamnyama, eyona ndawo ibaluleke kakhulu kwiifoto ezindala ezimnyama namhlophe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umfanekiso kunye nesandi » Ukufota » Ungayifaka njani imibala iifoto ezimnyama nezimhlophe